Nagu saabsan - Hebei Kenuo Products Rubber Co., Ltd.
waxaa markii ugu horaysay la aasaasay 1994, oo ay weheliyaan shaqaale muhiim ah oo kooban. Iyadoo ay la socoto horumarka, waxaa lagu kharash gareeyay shirkada morden maanta. caasimada la diiwaan galiyay waxay ahayd 5 milyan oo RMB, oo ku taal Xinle City Development Economic Zone waxayna ku fadhidaa aag dhan 26668 mitir murabac, dhismaha ugu weyn waxaa ka mid ah dhismaha R&D, dhismaha xafiiska waxqabadka badan, aqoon isweydaarsiga wax soo saarka, bakhaarka alaabta ceyriinka ah, bakhaarka alaabada dhammaatay, qolka qeybinta quwadda, haanta biyaha ee wareega, haanta biyaha dabka iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Shirkadeenu waxay leedahay wadar ahaan 118 qof, oo ay ku jiraan 5 shaqaale maareyn sare ah, 3 injineero horumarineed wax soo saar, 7 farsamo yaqaan sare, 103 shaqaale wax soo saar iyo kuwa kale. Shirkaddu waxay leedahay dhowr waaxood, nidaam maamul oo jaango'an, socodka shaqada oo qumman iyo nidaamka adeegga macaamiisha oo wanaagsan, kaas oo bixiya dammaanad adag oo loogu talagalay horumarinta wax soo saarka, wax soo saarka, tayada, iibka iyo adeegga iibka kadib iwm.
Ganacsiga ugu weyn ee shirkaddu waa soo-saarista, farsamaynta iyo iibinta wax soo saarka kabaha, walxaha caagga ah, waxyaabaha caagga ahiyo alaabada caaga ah. Wax soosaarka miisaanka, waxsoosaarka heerka sare iyo wax soo saar tayo sare leh lagama saari karo qalabka aadka u fiican, Kenuo Rubber wuxuu si weyn u maal galiyay hordhaca iyo nashqadeynta madaxbanaan iyo soo saarida dhowr khadadka wax soo saarka. Shirkaddu hadda waxay leedahay 3 nooc oo khadadka wax soo saarka ah oo ah nooca SJZ80 / 156 nooca dhoobada macmalka ah iyo 12 nooc oo ah khadadka wax soo saarka ee wax lagu durayo ee dacas caag ah, taas oo lagu gaari karo wax soo saar sanadle ah oo ah 75000 mitir murabac oo xaashi silikoon ah oo sawir qaade ah, 1.8 milyan mitir murabac oo synthetic ah dusiyeen, 300 kun oo mitir murabac oo ahdabaqa caag cagaaraniyo 12 milyan oo kabo dacas ah. Qiimaha wax soo saarka sanadlaha ah waa 266 milyan yuan.
Tuulada macdanta 'synthetic tile' ee lagu soo saaray shirkadeena waxay leedahay astaamaha anti-gabowga, culeyska ka hortagga, u adkeysiga daxalka, kuleylka kuleylka, dib u dhigista dabka, kuleylka, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka, oo si ballaaran loogu adeegsaday injineernimada fidsan ilaa-janada, aagagga miyiga ah ee cusub, hoolalka iyo guryaha martida, soojiidashada qaabkii dadkii hore, carport iyo garaash, warshadaha iyo warshadda macdanta, aashitada iyo dhirta caabbinta alkali, dhismaha ilaalinta dhaawaca cusbada xeebta iyo meelo kale, taas oo ah waxyaabaha ugu habboon dhammaan noocyada oo ah dhisme joogto ah saqafka qurxinta iyo biyuhu. Soosaarka Kenuoleedhka cusbada dardaaranka ah waxay horseed u tahay hagaajinta qaabdhismeedka warshadaha ee warshadaha lebbiska, oo waliba si buuxda uga jawaab celiya siyaasadda ilaalinta deegaanka ee dalka ee kaarboon hooseeya iyo sameynta bulshada ilaalinta tamarta.
Waxyaabaha kabaha lagu sameeyo ee ay soo saartay shirkadeena waxaa ka muuqda naqshad gaar ah, qaab dhammaystiran, tayo deggan, raaxo iyo qurux, badbaado caafimaad iyo bey'adeed, oo hadda leh EVA, PE, PVC, caag, kabo-caag-caag ah, kabo, dacas, kabaha xeebta , siibada, dacas musqusha, kabaha hoteelka, kabolaato kartoon, kabo jelly, kabo dacas lammaane ah iyo kabo suufka EVA ah. Shirkaddu waxay diiwaangelisay sumadaha "Home Baby" iyo "Jianmeida", kuwaas oo si wax ku ool ah u hagaajiyay muuqaalka badeecada iyo qiimaha ganacsi ee shirkadda.
Bishii Abriil 2014, shirkaddu waxay diiwaangalisay oo ay maamushay Taobao mall, taas oo kordhisay kanaalada iibka, oo si toos ah loogu dhex daray macaamiisha, si buuxda u fahansan tahay baahida macaamiisha iyadoo la ogaanayo mugga iibka isla markaana la sameeyay xiriir macmiil oo wanaagsan Shabakada iibka ee shirkadu waxay ka koobantahay in kabadan 20 gobol iyo degmooyin iyo ismaamul goboleedyo ku baahsan dalka, waxayna ku naaloonaysaa sumcad sare suuqa. Intii ay xasilineysay suuqa gudaha, si firfircoonna u baareysay suuqa caalamiga ah, Febraayo 1, 2013, shirkaddu waxay heshay shahaadada diiwaangelinta ee waaxda caddeynta kastamka Jamhuuriyadda Dadweynaha kadib markii ay hantidhawrku socdeen (diiwaangelinta kastamyada codaynaya: 1301965360); Bishii Oktoobar 2014, shirkadeena waxaa loo ansixiyay xubin ahaan waxayna heshay shahaadada xubinnimada ee Rugta Ganacsiga Shiinaha ee Soo Dejinta iyo Dhoofinta Alaabada Warshadaha Fudud iyo Farshaxanka-Farshaxanka (Shahaadada Lambarka 03140021). Si xoog leh u fuliya ganacsiga shisheeye, si wax soo saarka Kenuo ay ugu baxaan adduunka.